जनताले केके सुझाव दिए - Digital Khabar – डिजिटल खबर
Home / राष्ट्रिय / जनताले केके सुझाव दिए
जनताले केके सुझाव दिए
By Digital Khabar on July 22, 2015
धर्मनिरपेक्षता हटाऊ,संघीयतामा फेरि सोच
काठमाडौं : नयाँ संविधानका लागि जनताले थुप्रै सुझाव र राय दिएका छन्। जनमत संकलनका लागि मुलुकभर तोकिएका केन्‍द्रमा सहभागी भएर जनताले संविधानको मस्यौदालाई अझै जनमुखी, लोकतान्त्रिक र समावेशी बनाउन लिखित र मौफिक रुपमा धेरै सुझाव दिएका छन्।
स‌ंविधानका लागि सर्वसाधरण जनताले पहिलोपटक सुझाव दिने अवसर पाएका हुन्। आफ्नै गाउँठाउँमा उभिएर संविधानका लागि सुझाव दिन पाउने मौकालाई जनताले गर्वका साथ सदुपयोग गरेका छन्। सबैले छिटो संविधान बनोस् भन्ने चाहना राखेका छन्।
तराई तथा अन्य केही जिल्लामा जनमत संकलनलाई बिथोल्ने प्रयास भए पनि सुझाव लिने काम रोकिएन। झडप र तनावबीच पनि जनता कार्यक्रमस्थलमा पुगेर आफ्ना मत राखेका छन्। जनताको सुझावलाई अवरोध गर्ने क्रममा सोमबार र मंगलबार केही जिल्लामा झडप भएका छन्। तर जनमत रोक्ने प्रयास असफल भएका छन्।
जनस्तरबाट आएको अधिकांश सुझावको जोड दुईवटा पक्षमा छ : धर्म निरपेक्षता हटाऊ र संघीयतामा फेरि सोच ।सुझाव दिने क्रममा अधिकांश नागरिकको सरोकार धर्मनिरपेक्षता र संघीयतामा देखिएको छ। प्रदेशको संख्या घटाउनुपर्ने र धर्मनिरपेक्षता हटाउनुपर्ने सुझाव अधिकांश जनताले दिएका छन्।
केही घटनालाई छोडेर अधिकांश जिल्लामा जनताको सहभागिता उत्साहपूर्ण देखिएको स्थानीय संवाददाताहरुले बताएका छन्। अवरोध गर्ने केही पक्ष तथा समूहरुले जनतालाई बीच बाटोमै रोक्ने प्रयास गरे पनि जनताले नै त्यसको प्रतिकार गरेका छन्। सुझाव लिन आयोजित कार्यक्रममा गृहणीदेखि साना बालबालिका, वृद्धवृद्धा, पेसाकर्मी, कलाकर्मी लगायत सबै क्षेत्र, सम्प्रदाय, व्यवसायसँग आवद्ध मानिसको सहभागिता थियो।
सरकारले संविधानको मस्यौदामा जनताको सुझाव लिने कामलाई थप सहज र व्यवस्थित तुल्याउन सोमबार र मंगलबार सार्वजनिक विदा दिएको थियो। सुझाव संकलनका लागि हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा सभासद्सहितको टोली खटिएको थियो। जनतालाई पायक पर्ने गरी हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा विभिन्न स्थानमा सुझाव संकलन केन्द्र राखिएको थिए।
सुझाव दिने क्रममा अधिकांश नागरिकको सरोकार धर्मनिरपेक्षता र संघीयतामा देखिएको छ। प्रदेशको संख्या घटाउनुपर्ने र धर्मनिरपेक्षता हटाउनुपर्ने सुझाव अधिकांश जनताले दिएका छन्।जनताबाट आएका सुझावलाई समायोजन गरी हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा खटिएका सभासद्ले प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेछ। ती प्रतिवेदनमाथि संविधानसभामा छलफल हुनेछ।
जनताले बढी जोड दिएका केही महत्वपूर्ण सुझावलाई बुँदागत रुपमा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :
धार्मिक निरपेक्षता हटाउनुपर्छ। धार्मिक स्वतन्त्रता राख्‍नुपर्छ। हिन्दु मुलुकको पहिचान मेटाउनु हुँदैन।
प्रदेश संख्या घटाउनुपर्छ। आठ प्रदेश मुलुकले थेग्न सक्दैन।
सभासद्, मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री हुनका लागि निश्चित शैक्षिक योग्यता तोकिनुपर्छ।
प्रस्तावना सटिक र संक्षीप्त हुनुपर्छ। उँट बनाउनु हुँदैन।
राष्ट्रपतिदेखि वडा अध्यक्षसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनुपर्छ।
प्रमुख कार्यकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ।
एउटै व्यक्ति दुईपटकभन्दा बढी सांसद हुन नपाइने व्यवस्था राख्‍नुपर्छ।
चुनाव हारेकलाई समानुपातिकमा ल्याउन वा मन्त्री बनाउन नपाइने।
बन्द तथा चक्काजामजस्ता हिंसात्मक विरोधलाई संविधानमै निषेध गर्नुपर्ने।
राष्ट्रिय दल बन्नका लागि निश्चित मत (थ्रेस होल्ड) को व्यवस्था हुनुपर्ने।
विद्यार्थी तथा शैक्षिक क्षेत्रमा राजनीतिलाई पुरै निषेध गर्नुपर्ने।
उच्च शिक्षालाई सुलभ बनाउनुपर्ने।
महिला तथा पछाडि परेका अन्य जाती, समुदाय र क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने
राष्ट्रभाषा , राष्ट्रिय जनावर र राष्ट्रिय पोसाकबारे स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने।
पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने।
भ्रष्टचार गर्नेहरुमाथि अत्यन्तै कडा सजायको व्यवस्था हुनुपर्ने।
न्यायलाई अझै स्वच्छ र पारदर्शी बनाउनुपर्ने।
पटकपटक प्रधानमन्त्री र सरकार फेरिने सत्ताको खेललाई रोक्न विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने।
आमा वा बुबा दुबैको नामबाट सन्तानलाई नागिरकता दिनुपर्ने।
बलात्कार र बालबालिका एवं महिला बेचबिखनजस्ता गम्भीर अपराधमा मृत्युदन्डको सजाय हुनुपर्ने।
अखण्ड सुदुरपश्‍चिम टुक्राउन नपाइने
‘सांसद हुन स्नातक…
जनताका सुझाव आजै…
मस्यौदामा सुझाव संकलन…
आक्रोश, जिज्ञासा अनि…
Related ItemsBICCdigital khabarInternationalMasuda SankalanNationalNepalNewsPoliticsSambidhanSujabWorld
← Previous Story ‘खोइ संविधानमा कृषक?’
Next Story → बास्नादार र बृहत धान कार्यक्रम एकसाथ
1. नेपालको सार्वभौमिकता एवम् अखण्डतालाई अक्षुण राख्न विभिन्न शक्ति ,पैसा वा इष्टमित्रको सहयोग दुरुपयोग गरि नागरिकता लिन नपाउन भनी सुक्ष्म अध्ययन अनुसन्धान गर्न विशेष खालको3वटा संरचना निर्माण गर्ने,यी तीनटै मध्ये 1न.ले विस्तृत अध्ययन गर्ने,2न.ले सुक्ष्म अध्ययन गर्ने , 3न. ले अति सुक्ष्म अध्ययन गरि सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने ।यो संरचना हाम्रो देशको लागि अत्यन्तै आवश्यक छ ।
2 .धर्म निरपेक्षता को साटो धार्मिक स्वतन्त्रता नै अति उपर्युक्त हुन्छ ।
3 . जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिय शासन प्रणाली नै देशको राजनैतिक स्थायित्वको निम्ति अति आवश्यक छ र वडा अध्यक्ष देखि मुख्य मन्त्री सम्म सबै प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ ।
जन प्रतिनिधि(सभासद)बन्न न्युनतम स्नातक र राष्ट्रपति- प्रधानमन्त्री बन्न पनि स्नातकोत्तर अध्ययन पुरा गरेको हुनुपर्ने ।
4 . हाम्रो देशमा अवस्थित मठ-मन्दिर,देवालय तथा अन्य जुनसुकै धर्मका आस्था केन्द्रमा दिइने कुनै पनि प्रकारको पशुपंछीको बली निषेध हुनुपर्ने किनकी पृथिवी सबैको साझा घर हो तसर्थ यहाँ सबै पशुपंछीको बाँच्न पाउने अधिकार समान छ त्यसैले पशुपंछी मैत्री संविधान बनोस्
5 . निर्वाचनमा 5% थ्रेसहोल्ड हुनुपर्ने र कम्तीमा5जना प्रत्यक्ष निर्वाचित भएको दललाई मात्रै राष्ट्रिय दलको मान्यता दिनुपर्ने ।
6 . हरेक नेपाली युवा-युवतीहरुको शिक्षा,स्वास्थ्य तथा रोजगारी मौलिक हक अन्तर्गत राखिनु पर्ने ,रोजगरीको व्यवस्था नहुन्जेल वेरोजगार भत्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
7 . नेपाली कला ,गीत,संगीत एवम् संस्कृतिको जगेर्ना गर्न विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने र कलाकारकलाई निवृतिभरणको सुविधा हुपर्ने ।
संविधानको मस्यौदा 2072 मा समेटिनु पर्ने सुझाव:
2 .धर्म निरपेक्षता को साटो हिन्दू राष्ट्र नै अति उपर्युक्त हुन्छ ।